बाणिज्य बैंकको नाफा कति ? – Taza Post
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन वाणिज्य बैंकहरु सबैले प्रकाशित गरिसकेका छन् । २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा कस कसले कस्तो प्रतिवेदन पेश गरे छन ? चैत मसान्तसम्मको अवधिमा अधिकांश बैंकहरुको वित्तीय विवरणहरु राम्रो देखिएको छ ।
चुक्ता पुँजीको आधारमा २८ वटा वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकको रहेको छ । जसको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ४४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
४ वटा बैंकहरुले १० अर्बमाथि चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन ,भने ९ अर्ब पुर्याउने ४ वटा बैंक रहेका छन् । १८ वटा बैंकले ८ अर्ब पुर्याएका छन र २ वटा बैंक कुमारी र एनसिसि बैंकले भन ८ अर्ब रुपैयाँ पनि पुर्याएको छैन । कुमारी बैंकले दुई आवको २१ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयरले बल्ल ८ अर्ब पुर्याएको छ ।
यस तेस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफा सबैभन्दा बढी कमाउने अर्थात ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंक हुन । जसले क्रमश नाफा ३ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र ३ अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस बैंकहरुले १३ दशमलव ४२ प्रतिशत र ३ दशमलव १७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
त्यस्तै, २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनआईसि एशिया बैंक, नेपाल बैंक, एभरेष्ट बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालय बैंक रहेको छ । २८ वटा कम्पनीमा सबैभन्दा कम नाफा कमाउनेमा सिभिल बैंक रहेको छ । जसको नाफा ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कमाएको छ ।
२८ वटा कम्पनीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा अत्याधिक नाफा बढाउनेमा एनआईसि एशिया बैंक रहेको छ । जसले १४५ दशमलव ४१ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरी २ अर्ब २७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोहिअवधिमा नाफा ९२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो ।
त्यस्तै, मेगा बैंकले पनि १३१ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २१ करोड ४२ लाख रुपौयाँ आर्जन गरेको छ ।
२८ वटा कम्पनीमा २५ वटा बैंकले नाफा बढाएको छ भने ३ वटा बैंकले नाफा नाफा घटाएको छ ।
सेन्चुरी बैंक्ले ९ दशमलव ०६ प्रतिशतले घटेर ६१ करोड कमाएको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ९ दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ५६ करोड र नेपाल बैंकले १२ दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोहिअवधिमा नाफा २ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कमाएको छ ।
सबैभन्दा कम नाफा बढाउनेमा नबिल बैंक रहेको छ । जसले ३ दशमलव १७ प्रतिशतले नाफा बढाएर ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कमाएको छ ।(source)
Previous दुई माइक्रोफाइनान्सको आइपीओ निश्कासन, प्रत्येकमा रु. १००० हाले पुग्ने
Next जेठ महिना भित्र ९ वटा कम्पनीको एजिएम हुँदै, शेयरधनीलाई कुनले कति बोनस खुवाउँदै ?